Farmaajo oo war kasoo saaray geerida ku timid Janaraal Maxamed Abshir (Akhriso) - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo war kasoo saaray geerida ku timid Janaraal Maxamed Abshir (Akhriso)
Farmaajo oo war kasoo saaray geerida ku timid Janaraal Maxamed Abshir (Akhriso)
Muqdisho (Caasimada Online)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ka hadlay geerida ku timid Janaraal Maxamed Abshir Muuse.
Madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Janaraal Maxamed Abshir Muuse oo ku geeriyooday dalka Mareykanka.
”Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay, Alle ha u naxariistee, Janaraal Maxamed Abshir Muuse.”
”Janaraalku waxa uu ahaa shakhsi karti, dhawrsanaan, daacadnimo iyo dal jacayl ku sifoobay. Waxaa lagu xasuustaa kaalintii uu ka geystay dhismaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo muddo 10 sano ku dhaw uu hoggaaminayay. Waxaan Alle (S.W.T) uga baryayaa inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, ehelkii iyo qoyskii uu ka baxayna sabar iyo iimaan haka siiyo. Aamiin”